त्रिवि शिक्षण अस्पतालले कोरोना लागेको छ भनेर अस्पतालमा छिर्नै दिइएन, जबर्जस्ती छिरे पनि डाक्टरले छुनै मानेनन् – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/त्रिवि शिक्षण अस्पतालले कोरोना लागेको छ भनेर अस्पतालमा छिर्नै दिइएन, जबर्जस्ती छिरे पनि डाक्टरले छुनै मानेनन्
लठ्ठी टेकेर अस्पताल हातामा रामशरण उभिएका थिए । अहिले घुडाँको उपचार नहुने डाक्टरले भनेको उनले बताए । अस्पतालमा एक्स रेको काम नहुने भएपछि गाडी पाएमा कलंकीमा गएर निजी अस्पतालमा देखाउने बिचार गरेको उनले बताए ।निजी अस्पतालमा उपचार खर्च महँगो हुने भएपछि दाजुभाई त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज आएका थिए । जटिल स्वास्थ्य समस्या नभएपनि उपचार नभई फर्किनुपरेको उनले सुनाए ।
राति साढे ९ बजे शिक्षण अस्पताल आइपुगेका थिए । ज्वरो १ सय २ डिग्री थियो । सुरुमा त ज्वरो आएको छ भनेपछि अस्पतालको गेटबाटै छिर्न नदिएको उनले गुनासो गरे । रातिको साढे ९ बजे कहाँ जाने भनेर जर्वरजस्ती इमर्जेन्सीको खाली बेडमा बसे । आमा मनमाया रातभरी अस्पताल बाहिरको कुर्सीमा बसिन् । उनले भनिन्, ‘चिसो भयो रातभरी निन्द्रा लागेन ।’ज्वरो नाप्न पनि डाक्टरले थर्मोमिटर किन्न लगाएको र आफैले नापेपछि टाढाबाट हेरेको उनले सुनाए । अस्पतामा उपचार नपाएपछि उनी घर फर्किने बिचारमा थिए । एम्बुलेन्सले ९ देखि १० हजार भनिरहेको र त्यो पनि सहजै नपाएको बताए । उनीहरु कलंकीसम्म पुग्न पाए एम्बुलेन्स पाइने तर कलंकीसम्म कसरी जाने भनेर बसिरहेका थिए ।
उनले भनिन्, उनीहरुलाई सबै सुविधा दिएको छ, समाउन पनि डर माने जस्तो गरे । अलिकति त हेर्नुपर्छ नि । डाक्टरले छुनै नजाने भन्ने नि हुन्छ र ? त्यस्तो हो भने किन अस्पताल आउनु हैन र ? बिरामीको कस्तो अवस्था छ बुझ्नै नचाहने, बिरामीसँग बोल्नै नचाहने गैरजिम्मेवार व्यवहार छ ।उनले डाक्टर र नर्स अस्पतालको काउन्टरमा बसेर हाँसेर गफ गरेर बस्ने तर बिरामीको वरीपरी पनि नजाने गरेको गुनासो गरिन् । डाक्टर र नर्स विरामीको अगाडि नै नपर्ने हो भने अस्पताल बन्द गर्नुपर्ने उनको गुनासो थियो ।
लकडाउन एक साता थप्न उच्चस्तरीय समितिको सुझाव